व्हाट्सएपले हामीलाई हाम्रो डाटाको प्रतिलिपि डाउनलोड गर्न अनुमति दिनेछ ग्याजेट समाचार
यो अस्वीकार गर्न सकिदैन कि मे २ 25 का घटनाहरूले टेक्नोलोजी कम्पनीहरूलाई घडीको बिरूद्ध काम गर्दछ र परिवर्तनहरू बनाउँदछ जब अधिक डेटा संकलनमा आउँदछ। नयाँ डेटा संरक्षण कानूनले नयाँ नियममा अनुकूलन नगर्ने कम्पनीहरूलाई ठीक गर्न सक्दछ। Y यसको घोषणा भैरहेको परिवर्तनसँगै व्हाट्सएप पहिले नै तयार छ। तर सब भन्दा महत्त्वपूर्ण: तपाईं आफ्नो डाटाको एक प्रतिलिपि चाँडै अनुरोध गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
मा आफ्नै ब्लग व्हाट्सएप, कम्पनीले घोषणा गर्‍यो कि यसले परिवर्तन गर्दछ र फेरि जोड दिन्छ कि सबै डाटा अन्त्य देखि अन्त एन्क्रिप्टेड हो र ती पनि पनी पढ्न वा सुन्न नसक्ने कुरा तपाईसंग भएको कुराकानीहरु। त्यस्तै, तिनीहरू यो पनि स्पष्ट पार्दछ कि ती प्रयोगकर्ताको अनुभव सुधार गर्न वा फेसबुक विज्ञापन प्राप्त गर्न तपाईंको डाटा साझा गर्दैनन्। उनीहरू बढि फेसबुक कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने इरादा राख्छन्, तर समाचार छिट्टै र उत्तम विवरणमा आउनेछ। जे होस्, हामी केमा धेरै रुचि राख्छौं तपाईंको सबै डाटा को डाउनलोड अनुरोध अनुरोध को संभावना हो.
कम्पनीले सुनिश्चित गर्दछ कि आउने हप्ताहरूमा हामीसँग व्हाट्सएप कन्फिगरेसनमा एक नयाँ उपकरण छ र यो विश्वव्यापी रूपमा सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ। अवश्य पनि, ती सबैलाई तत्काल सन्देश सेवाको पछिल्लो संस्करण उपलब्ध हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै, यो दुबै एन्ड्रोइड र आईओएस प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्नेछ.
तपाईं कसरी आफ्नो सबै डाटा डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ? तपाईंले "सेटिंग्स" प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र "खाता" सेक्सनमा जानुपर्नेछ। त्यसो भए हामीसँग एक नयाँ विकल्प हुनेछ - यो लेख लेख्दाखेरि उपलब्ध छैन - जसमा तपाईले अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ Account खाता जानकारी अनुरोध गर्नुहोस् »। यसका साथ तपाईंले व्हाट्सएपमा अनुरोध पठाउनुहुनेछ र जुनसँग तपाईंले अधिकतम तीन दिनमा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यस समय पछि, तपाईंले कम्पनीबाट सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई भन्दै छ कि तपाईंसँग पहिले नै डाउनलोड गर्न फाइल छ। यस अवस्थामा तपाईले पहिले जस्तो ठाउँमा जानु पर्छ सेटिंग्स> खाता> खाता जानकारी अनुरोध गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईंसँग पूर्ण रिपोर्ट डाउनलोड गर्न विकल्प हुनेछ। तपाईं एक ZIP फाइल डाउनलोड हुनेछ जसले एक HTML विस्तार र अर्को JSON साथ फाइल समावेश गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » व्हाट्सएपले हामीलाई हाम्रो डाटाको प्रतिलिपि डाउनलोड गर्न अनुमति दिनेछ